Sidee si aad u aragto iyada oo markii ugu kulul qowladda pachinko ah
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Sidee si aad u aragto iyada oo markii ugu kulul qowladda pachinko ah
Oo zone kulul ama waqtiga aad inta waqti si, aad waxaa laga yaabaa in si wanaagsan loo maqlay. Qaro weyn zone waqti, taas oo ku xidhan gobolka qowladda pachinko oo ka mid ah goobta iyo xaaladda shaqada iyo iibka ah, waxaa iman doona qaar ka mid ah farqiga waa ka baxay gabi ahaanba. In, sababtoo ah waxaan qabaa zone waqti aan qaro waaweyn ma oga, halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa qowladda pachinko guud ee zone waqti qaro weyn.
qaro leh zone markii ugu, kuwaas oo, tii pachinko noqon doontaa in zone waqti in aad jeclaan lahayd in la kordhiyo howlgalka a. 'S zone rajo wakhtiga soo socda si ay macaamiisha ugu fiican. Sidaas daraaddeed, in sida zone waqti, inaad soo beeray wax kooxda martida pachinko ah. Tusaale ahaan, iyo sidoo kale arki yahay farqiga u dhexeeya saacadaha u furan ah. Xaaladaha qaarkood oo keliya
1 model, si ay u joojiyaan hannaanka ee lagu daydo, waxaa sidoo kale waa kiis in la furay by farqiga waqtiga. Oo sida 13 SFIga oo la furay iyo 18 subaxnimo model furan, waxaan u malaynayaa in dadka qaar ayaan ku arkay lagu dhawaaqo. Xaqiiqada ah in uu leeyahay farqiga waqti furan, waa in aad doonayso ordaya wakhtigaas. Iyo, in model ah in uu noqdo bartilmaameed u ah farqiga waqti u furan, ama goob height Horukon waxaa la dhigay baabuurta yar guud ahaan, Annagu waxaannu nahay ama isku dayaan in la furo badan sixitaanka ciddiyaha caadiga ah.
sidoo kale ka ciyaari isha ku kala duwan yihiin waqtiga furan, waxaan u malaynayaa in ay tahay hab wanaagsan inuu ku guuleysto.
Intaa waxaa dheer, haddii kale waa ma farqiga u dhexeeya saacadaha u furan, sida hadlayay zone waqti kulushahay ama, wax badan pm subaxnimo ka ku saabsan 3:00 pm 5 ama 6, iyo aag waqti qaro weyn ugu sareysa ee ujeedadu th aad Inkastoo. In zone wakhtigan, oo waxaad ku tidhaahdaa maxaad u qaro zone markii, dadka si Tomokazu yimid waxaa, waxaad samaysay maalgashi ilaa xad.
Intaa waxaa dheer, xogta maalintii hore ee, tan iyo xogta of dhowr saacadood ee maalinta loo arki karaa, ka badan si ay u tagaan Tomokazu, waxaan u istaagaan u badan tahay in ay doortaan. i Haddii ujeedadoodu of madal waa la cidhiidhi ah, ka badan ku Daynanaa Iyagoo ku dhuftay miiska oo dhan, waxa ay noqon doontaa faa'iido.
hadda jiraan noocyo in ay yihiin qalabaysan feature la yiraahdo kala duwanaansho itimaalka qarsoon. Waa by dukaamada, laakiin aan lahayn cadaymihii kala duwanaansho ah itimaalka qarsoon, waxa sidoo kale in ay qaadeen in ka badan in ay maalinta ku xigta. noocan oo kale ah Pati Haddii aad hesho dukaan Nko ah, waxaa la odhan kara in Tomokazu sidoo kale qaro zone waqti.
si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho this kala duwanaansho itimaalka qarsoon, sidoo kale waxaan sida Miyabureru qarsoon, waa maxaa yeelay waxa ay xusuusan qeybta, laakiin waxa aad u baahan doontaa in aad wax yar ka bartaan, laakiin weli, haddii aad ka heli in Tomokazu, kala duwanaansho jaaniska la hubo waa in gudaha maxaa yeelay, waa tarjumaadda in aad tahay, waxaa la dhammeeyey lahaa maalgashiga yar oo kor u soo jiidi hit a. Haddii waqtigan aan ku jirno, in sida jaaniska ka tago ka sareeyo, ma zone wakhtigaas xaqiijin karo ay tahay xaalada dhabta ah. All of mishiinka pachinko
, tan iyo ROM ah waxaa maamula, haddii aad leedahay control fog, waa sababtoo ah waa dukaamo dhinaca wax aan macquul aheyn in ay ku cayaaraan. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ku xiran dhacdooyin dhinaca zone waqti iyo dukaamo in horaantii sara kiciyey, waxa ujeedadiisu tahay dhirta ayaa la taaban karo cidhiidhi doonaa. waqti Event, oo la mid ah dukaamada shakhsi sidoo kale in tixraaca, isku day lagu doonayo zone waqti in uu noqon karaa mid si hufan maalgashi.